NextMapping | NextMapping ™ - Tarisira, Enda uye Gadzira Remangwana reBasa
NextMping™ - Tarisira, Enda uye Gadzira Remangwana reBasa
BHUKU idzva "NextMapping ™ - Tarisira, Enda uye Gadzira Remangwana reBasa ”Ikozvino yaburitswa uye inowanikwa pa Amazon.
NextMapping ™ - Tarisira, Enda uye Gadzira Remangwana reBasa
Iko kumhanya kwekuchinja kwakapetwa kagumi nekukurumidza kupfuura zvayakaita makore gumi apfuura uye 40% yanhasi Fortune 500 haizovepo mumakore gumi anotevera. Iko kudikanwa kwekukurumidza kwevatungamiriri vanoshanda, zvikwata pamwe nevamabhizinesi kuti vashingairire kutsvaga uye kushandisa maitiro ekugadzira ramangwana rebasa.
NextMping ™ inopa zvishandiso uye marongero ayo anokukurudzira iwe pamwe nemasangano ako kugona kutungamira ramangwana rebasa nekuwedzera kwakawedzerwa, agility uye kuwirirana. Nekutsvagisisa kwakawanda mune ramangwana rebasa, rakaratidzirwa track rekodhi yevatengi vanobudirira uye makumi maviri emakore ekuve mumwe wepamusoro bhizinesi repasi rose 'enda' kune vanachipangamazano Cheryl Cran inopa zvakavanzika zvekushandura zvinovhiringidza kuchinja kuve mukana uye mukana. NextMping ™ imhando yakatsanangurwa iyo inoburitsa matanho ekukubatsira kufamba mune ramangwana uine chokwadi chakawanda munyika isina kugadzikana uye isina chokwadi. Uchishandisa nheyo dzeNextMping ™ modhi iwe uchadzidza nzira yekufungidzira zviri nyore, kufamba uye kugadzira ramangwana rakakura rekushanda iwe pachako, zvikwata zvako uye nekambani yako zvinounza mukana wakakura wemakwikwi.
Iko maitiro anokanganisa ramangwana rebasa kusanganisira hunhu hwevanhu nehunyanzvi
Aya matatu mindsets iwe aunoda kuti uve akagadzirira mune ramangwana izvozvi uye kuve anoshanduka
Maitiro ekuverenga zviratidzo zveshanduko kuitira kufungidzira uye kuve pamberi pemasimba anokanganisa
Mashandisiro aungaita iyo InoteveraMapa™ modhi yekugadzira ramangwana yakagadzirira tsika uye kambani
Mepu kunze uye kuronga pfupi pfupi uye yepakati-matanho mazano mune kukura mikana
Maitiro ekurudzira vamwe kuti vagadzirise ramangwana uye 'kutungamira shanduko' kuti vasvike ipapo
Iyo Inofanirwa- Kuverengewa Nemunhu wese Anoshanda Kana Kutungamira Bhizinesi Pamazinga Ese
"Ndakave nemukana wekunzwa Cheryl Cran mune imwe yehurukuro dzake gore rapfuura, uye bhuku rino ndicho chinhu chinotevera chakanakisa kune chero munhu anofarira ramangwana rebasa uye shanduko yenyika yanhasi inoshanda kune nyika yanhasi, nhasi. Iri bhuku rinofanirwa kuverengerwa nekukurukurwa nevashandi vese nevatungamiriri vebhizimusi pamatanho ese, kuti vanzwisise zvinokurudzira tsika nyowani dzekushanda (millennials uye Get-Z) uye kuti tsika dzenhaka dzinogona kubatana sei nekushanduka pamwe neaya anouya tsika kuzadzikiswa kumwe. yezveramangwana rebasa. Iri bhuku rinofanirwa kukurukurwa mumakoreji, mune Nhasi Ratidza, chero kupi uko tariro uye kufambira mberi kweramangwana rebasa zvinokurukurwa. Cheryl's Infographics kumagumo kwechitsauko chimwe nechimwe chebhuku rino ndiwo mutengo wekubvumidzwa, wega. Tekinoroji, hunhu hwemagariro, uye psychology zvinopindirana zvisina tsananguro mukutsanangurwa kwake izvo zvine musoro mune zvedzidzo uye zvinoshanda. ”
- Chester M. Lee, Mutengi weAmazon
Iyo ramangwana rebasa, kuzvitungamira uye kurongeka kuri pano!
“Iri bhuku rakanakisa pane uyu musoro wenyaya wezveramangwana rebasa.
Cheryl anopa nyaya dzakawanda kwazvo uye matipi anoshanda zvekuti kana usiri kuverenga izvozvi izvozvi, uri kutadza kurasikirwa neramangwana. Kuva Gen XI ndinonzwa kugoneswa uye ini kubva zvino ndichazvipokana kuti ndive neakawanda, anogadzira uye nevanhu ekutanga mafungiro! Tinotenda Cheryl nekunyora bhuku iri nekugovana nenyika nezveramangwana redu rakanaka. ”
- Alice Fung, Mutengi weAmazon
Nhungamiro yakanaka kwazvo yekuronga uye kugadzirira ramangwana rebasa
“Semunhu anoshanda akazvimirira, ndakaona bhuku rinonzi NextMapping kuva gwara rakanaka pamarongero nekugadzirira ramangwana rebasa. Ini ndinofanirwa kuve pamusoro pezviitiko kuumba mashandiro emabhizinesi. Iri bhuku rakakodzera uye rinouya panguva yakakodzera kwandiri. ”
- Michelle, Mutengi weAmazon
Ziso-Kuzarura Ramangwana Rebhizinesi
“Bhuku iri rinoita basa rinoshamisa rinoratidzira mune ramangwana uye rinopa matanho anokwanisika kuyerwa kuti agadzirire kushanduka kwenzvimbo yebhizimisi. Iko kunyora nemazano zvinoratidzwa pachena munzira munhu anofarira kuverenga mabhuku ebhizinesi seni anogona kufarira. "Ini zvirokwazvo ndinokurudzira kana uri kutsvaga kuramba uri pamberi peiyo nyowani nyowani."
- Keran S., Amazon Mutengi
Ini ndakafemerwa nekukwanisa kwehunyanzvi hwekuita tekinoroji nemagariro ayo
"Cheryl ine yakasarudzika uye inokurudzira nzira yekugovana vanocheka uye vatungamiriri vekumusoro vanoenda kupfuura kungwara uye vanobatana nezvinokurudzira zvemukati. Pandakangoverenga Chitsauko 1 ndakamutswa uye ndikafemerwa nekwaniso yehunyanzvi uye nemhedzisiro yayo. Ini ndakanyanya kukoshesa infographics yechitsauko choga choga zvichiita kuti zvive nyore kuona kudzokororwa kwechitsauko chimwe nechimwe paziso - kupenya! Iri bhuku rinotarisisa ramangwana uye kuti vatungamiriri, nhengo dzechikwata uye vezvemabhizimusi vanogona sei kugadzira ramangwana rinobudirira. ”
- Teresia LaRocque, Mutengi weAmazon
Haudi kuda kuisa bhuku iri pasi.
“Kufamba neramangwana revashandi vedu idambudziko rakakura kudai. Ichi chiitiko chinonakidza uye chinojekesa. "Ndinokurudzira zvikuru bhuku rino kune chero munhu anotarisira kukura uye kubudirira munzvimbo yaanogara."
- Christine, Mutengi weAmazon
Ronga ramangwana rako
"NextMapping yaCheryl Cran inokupa ruzivo rwakakura pamusoro pemaitiro ekuumba zvese nzvimbo dzebhizimusi. Ini ndinoda nzira yaano zoom mukati nekunze. Iwo makuru maitiro, iwo maitiro ehukama. Ndinokurudzira zvikuru bhuku rino! ”
- Shelle Rose Charvet, Mutengi weAmazon
A Read Read
“Kunyangwe ini ndisiri muzvinabhizimusi kana muridzi webhizinesi, ndichiri kunakidzwa nebhuku iri zvakanyanya uye rinonakidza zvikuru. Zvakanakisa kuverenga! Iyo inondipa ini nemaonero matsva uye kufungisisa padyo-ramangwana bhizinesi nharaunda. Pasina kupokana, iri zvirokwazvo gwara rinobatsira rine mazano akanaka kune vezvemabhizimusi uye varidzi vekambani. Ndinokurudzira zvikuru! ”
- Wyatt Sze, Mutengi weAmazon
“NextMapping ndeyekutarisa kuti bhizinesi rinoenda kupi munyika umo AI uye marobhoti anotamba achiwedzera mabasa mubhizinesi. Cheryl Cran anopa chiratidzo chenguva yemberi isiri kure. Iye anokurukura kukosha kwekusara pamusoro pekutsvaga kuti bhizinesi rako riende kune ramangwana risina kurasikirwa munguva yakapfuura. Maitiro ekunyora aCran akajeka uye anobata. Ndakafarira kuverenga bhuku iri uye ndakariwana richidzidzisa uye richinakidza. Iri bhuku rakanyorwa nenzira yakarongeka uye inonzwisisika inoita kuti ive nyore kuverenga uye mifananidzo uye magirafu zvakawedzerwa kune izvi. Ini ndaifarira chaizvo zvikamu zvekufanotaura uye kupokana nenzira yauri kufunga nayo. Kuverenga kunonakidza uye kunokurudzira. ”
- Emerson Rose Craig, Mutengi weAmazon
Inofanirwa Kuverenga kwevatungamiriri, zvikwata uye vemabhizinesi
“NextMapping inofanirwa kuverengerwa vatungamiriri, zvikwata uye vezvemabhizimusi kuti vagadzirire ramangwana, IZVOZVI! Ndakawana bhuku racho richindipa nhanho dzinoshanda uye ini ndaida iyo PREDICT modhi. Zvikurudzira !! ”
- WomenSpeakersAssociation, Amazon Mutengi
Kuverengera kubudirira mune ramangwana
"Kugona kufamba uye kuwedzera ramangwana rebasa kwakakosha pakubudirira kwebhizimusi izvozvi uye mune ramangwana, uye NextMapping inokubatsira iwe kuita izvo Uchishandisa chaiyo mienzaniso yehupenyu, maturusi, uye anotungamira mabhuku zvakajeka kuputsa matanho ekutora kutora kuwedzera maitiro, uye kudzora kubudirira kwako. Izvi hazvingori zvemabhobhoti, AI, data uye tekinoroji. Iri bhuku pamusoro pevanhu, zvikwata, vatengi uye bhizinesi. SaMubatsiri wezvekutengesa, ini ndakawana iyo hurukuro mu "Iyo Yemberi Yakagovaniswa" chitsauko chine simba zvakanyanya. Pfungwa dzemushandi dzinoshanduka, nzira nyowani yebhizinesi inodikanwa inozokanganisa vashandi vako nevatengi vako. Zvisinei nechinzvimbo chako, musika webasa kana bhizinesi, verenga bhuku rino kana uchida kuramba uchikura kwemakore mashoma anotevera! ”
- Colleen, Mutengi weAmazon
Kugadzirira bhizinesi rako ramangwana
“Munyori webhuku iri anoti mabhizimusi nevemabhizimusi vanofanira kugadzirira izvozvi ramangwana rebasa sezvo richichinja nekuda kweAI, otomatiki, marobhoti uye nekukurumidza kushanduka kweshanduko. Izvi zvinoita zvine musoro chaizvo: "NextMapping inobatsira kushandura mavonis emangwana kuita mhinduro dzekugadzira uye zvirongwa zvinoshanda zve… vatengi vedu". Iyo inoteveraMapping kambani inobvunza ichatora nhamburiko kunze kwekutsvaga zviitiko zvenguva yemberi uye iwe unogona saka kubatsirwa neruzivo rwavo rwakakosha. Munyori anotarisa zvakadzama nezve marobhoti anotova nawo muminda yehutano, kugadzira, mari nekutengesa. Iye anoongorora mararamiro uye sarudzo dzebasa dziri kuitwa nevanhu nhasi kuti vafungidzire zvenguva yemberi. Chiitiko chinonakidza uye kuverenga kwakanaka. ”
- M. Hernandez, Mutengi weAmazon
Kuverenga Kunoshamisa Kwazvo
“Semuridzi webhizinesi diki, ndinogara ndichitya nezve kufunga kweAI, otomatiki uye robhoti, asi mukutendeseka kwese, ndinofunga kuti ndicho chinhu chinodiwa nevaridzi vemabhizimusi (veese saizi) nezvazvo, kuongorora uye kunyatso ziva nezvazvo maringe nezvekuti mabhenefiti aya anogona kukanganisa sei yavo nzvimbo yebhizinesi. "NextMapping: Tarisira, Navigation & Gadzira Ramangwana reBasa" zvakajeka uye muchidimbu kuputsa iri ramangwana remabhizinesi nenzira iri kuvhura maziso uye inonyanya kufanira kuverengerwa kune ese mabhizinesi, kunyangwe avo vanoti havangambo sanganisira marobhoti, AI kana otomatiki mukambani yavo. Bhuku rino rinozochinja mafungiro ako. ”
- Amy Koller, Mutengi weAmazon
Iri bhuku rizere nerakakosha ruzivo
“Ichi chiverengwa chipfupi asi chakazara nemazano nemazano evanamuzvinabhizimusi, varidzi vemakambani nevatungamiriri kuti vagadzirire ramangwana rebhizinesi uye vagare pamberi pemutambo kuti varambe vachibudirira kunyangwe bhizinesi rikave rakawanda. Sewe freelancer, ndinonzwa kunge bhuku iri richandibatsira kugadzirira zvirinani uye kugara ndichifambirana neapo mabhizimusi achachinja uye kukura. Semunhu anoshandirawo kambani diki Iri bhuku richandibatsira kuunza ruzivo rwakakosha patafura izvo zvese zvinobatsira kambani yedu kukura pamwe nekundibatsirawo kukura mukambani futi. Ndinoona sekunge bhuku iri rinofanirwa kuverengerwa nemunhu wese anonzwa ramangwana rebhizimusi rake zvichienderana nekugara parizvino nekuronga kumberi kuti bhizimusi ringazokura riini!
- Shanell, Mutengi weAmazon
Marobhoti ari kuuya! Asi icho chingave chisiri chinhu chakaipa…
“Kungofambira mberi kwemarobhoti uye software zvinodzorwa neAI zvinonakidza munzira dzakawanda, asi zvakare zvine zvazvinoreva uye mashandisirwo. Ai inogona kugadzirisa mararamiro atinoita mumakore gumi kusvika makumi maviri anotevera, uye sezvo tichishandisa chikamu chakakosha chehupenyu hwedu tichishanda, shanduko dzinogona kunge dzakakanganisa musika wevashandi uye nharaunda dzekushanda zvakare.
Zviri nyore kungozvidza shanduko yehunyanzvi sechinhu chisiri kuitika kwemamwe makumi emakore, asi chokwadi chiripo, chiri kutoitika uye chiri kukanganisa hupenyu hwedu, pamwe nekushanda kwemabhizimusi mazhinji. Vazhinji vatengesi veDVD havana kumboona Netflix ichiuya, uye Uber haisisiri izwi rinosekesa kune vese vatyairi vematekisi avo vakarasikirwa nechikamu chakakosha chemari yavo nekuda kweiyo smartphone app. Kunyangwe iwe uri muridzi webhizinesi diki kana CEO wekambani hombe, unofanirwa kuziva shanduko dzakaunzwa neAI uye ronga zviito zvako zvinoenderana kana uchida kubudirira mumakore gumi. "
- Mufundisi Stephen R. Wilson, Mutengi weAmazon
Iri bhuku rinodzidzisa kwazvo!
"Nextmapping" ibhuku rinopa nzira nemazano ekugadzirira vanhu nemabhizinesi kuti aenderane nechimiro chiri kukurumidza kuchinjika chehungwaru hwekugadzira, otomatiki, uye marobhoti. Bhuku rakarongeka chaizvo uye zviri nyore kuti muverengi aone kuti munyori ane ruzivo uye anonzwisisa musoro wenyaya. Munyori anounza yakawanda chaiyo-yehupenyu mienzaniso uye zviitiko zvidzidzo kubatsira muverengi kuti anzwisise kukosha kukuru kwekugona kuchinjika nekukasira kukurumidza kuchinja kwetekinoroji inobata mativi ese ehupenyu hwedu. Chandinonyanya kufarira nezvebhuku iri chirevo chePREDICT chinobatsira muverengi kutarisira ramangwana uye kunyatsogadzirira iro. Iri bhuku harisi revaridzi vebhizimusi chete uye vatungamiriri vemakambani vane hanya nekuvaka bhizinesi rinogona kumira shanduko yemwaka. Bhuku iri rinodzidzisa zvakare uye richabatsira chero munhu asingade kusiiwa nemafungu ekushanduka kwetekinoroji. ”
- Faith Lee, Mutengi weAmazon
Kune vateereri vanotarisana uye zvinonakidza zvinyorwa kune vese vaverengi.
“Ichitevera kudarikwa kwakajairika, bhuku rinovhura nemashoko pamusoro pemunyori, Musumo nezvikamu zvitatu zvemunhu. CHIKAMU chekutanga chine zvitsauko zviviri, chekutanga chinotsanangura kuti "Ramangwana IZVOZVO" uye inobvunza "Wakagadzirira Here?" yeiyo yatotanga kuwanda marobhoti, drones, AI uye nenzira dzakasiyana dzakashanduka dzekufunga dzevashandi nyowani vauchazofanira kugadzirisa. Chitsauko Chechipiri - "Ramangwana, Kufanotaura Nezveramangwana - Nzira Yekufungidzira" inotsanangura kwaunofanirwa kusarudza kuti zvinhu izvi zvinokanganisa bhizinesi rako riini uye sei. CHIKAMU CHECHIPIRI chine zvitsauko zvitatu zvinoongorora "Ramangwana reBasa." Yekutanga (Chitsauko Chechitatu) "Pfungwa dzeNavigator yeRamangwana rebasa" inotsanangura chaizvo kuti izvi zvinoda kuvei. Chitsauko Chechina, "Ramangwana rakagovaniswa" rinotsanangura kuti mafungiro evashandi vatsva achasiyana sei kubva kune avo vekare vachida nzira nyowani. Shanu, "Kufamba Nezvinetso zveNhasi - Chii Chinotevera" inoongorora zviripo uye zvemberi zvinhu. CHIKAMU CHITATU chine zvitsauko 2 ne3 zvinotsanangura izvo zvakakwana zvinodiwa kuti paumbwe 'Tsika Yekuvimba' mukati mevashandi kutarisana neramangwana revanhu neRobots, AI uye Automation. Chitsauko chekupedzisira chinosimbisa NextMapping ku "Gadzira Yako Ramangwana reBasa uye Goverana iro Ramangwana Rauri Kugadzira". Chinyorwa che "Zviwanikwa" uye Index inobatsira kwazvo inopedzisa bhuku.
Kukurukurirana: Iyi ndeimwe mune iri rakanyanya kuwanda mabhuku ari kuoneka kubatsira varidzi vebhizinesi, ma CEO, COO et etal. mukutarisana nemhedzisiro yezvinhu zvakawanda. Automation yakagamuchira yakanyanya kuwanda yekutarisisa kusvika parizvino nekuda kwekuwedzera kunotyisa kwedata iyo yatove dambudziko hombe uye rinogara richiwedzera nemabhuku akati wandei akakumikidzwa kudiwa rekuwedzera Cloud uye mikana yekugadzira Quantum Makomputa. Vashoma vakatarisa pane chako chinhu uye kubatanidzwa kwehunhu maficha ezvizvarwa zvakasiyana. Munyori uyu akaburitsa pamwechete zvizhinji zvezvinhu zvekupedzisira izvi, zvinoita kunge zvakapfupika kupfuura vamwe vandaverenga, uye akatsanangura kwete chete mutsauko wevatsva vanopinda kubva kune vavari kutsiva pabasa, asi hukama hwavo nekukurumidza-kukura nzvimbo dzeMarobhoti. AI uye otomatiki. Semumabhuku mazhinji akanyorwa nevarairidzi vanowanzo, pane kudzokorodza kukuru uko kunogona kukanganwika nekuda kwekushandisa kwayo 'kuita poindi'. Zvese mune zvese, mupiro wakakodzera kwazvo kune chinodiwa chekuwedzera ruzivo rwebhizinesi kuti urarame mune ino nyika iri kukurumidza kuchinja. Izvo zvinounza inonakidza pfungwa mupfungwa kune uyu muverengi. Kuongororwa nguva dzese kunozodiwa nemumwe munhu mune imwe chinzvimbo chesimba kuvimbisa kuvimbika kwechimwe nechimwe chezvikamu zve 'zvikwata'. Nezvikwata zvitsva zvinoita sarudzo, munhu mumwe chete asina kuzvipira anogona kuunza mhedzisiro isingadiwe achifunga chirevo chekare - Ngamera ibhiza rakagadzirwa nekomiti. ”
- John H. Manhold, Mutengi weAmazon
“Bhuku idzva raCheryl rakakosha kuverenga kune chero nyanzvi inoshanda inoda kutora matanho uye kugamuchira ramangwana rebasa. Ichitsigirwa nezvazvino kuitika uye data rakakosha kunyatsoongorora shanduko dzinokanganisa ramangwana rebasa, bhuku iri chishandiso chakakosha kune chero munhu anoda kudzidza kutarisira, uye kufambisa ramangwana nekubudirira kwakawedzera. "
“Sechikamu chebasa rako semukuru-mukuru, unofanira kukwanisa kutungamira sangano rako, zvisinei nemamiriro ezveupfumi, mukugadzirisa shanduko inokurumidza uye inogara iri munharaunda pamwe nehunyanzvi, pamwe nekukohwa mibairo yayo. Bhuku raCheryl rinopa chidzidzo chakanakisa chesangano ramangwana rinofanira kutarisira, pamwe nekupa hunyanzvi hunodiwa kusimudzira shanduko dzeramangwana dzinodiwa kusangano rako. ”
- Walter Foeman, Guta Munyori, Guta reCoral Gables
"Ndave achiziva Cheryl Cran kwemakore akati wandei uye akashinga anoshandisa research yake kuti agare achiongorora kana tiri kushanda nechiratidzo chezuva nezuva chakanangana nekukura uye kuwedzera. NeNextMping, Cheryl arikupa nharaunda yevemabhizimusi maturusi ekugadzirira masangano avo kune nyika yemberi umo hunhu nehunyanzvi zvichapindana nenzira dzisina munhu angafungidzira 20 makore apfuura. "
- John E. Moriarty, Muvambi & Mutungamiriri, e3 ConsultantsGROUP
“NextMapping inofanirwa kuverengerwa vatungamiriri nevashandi vanoshanda mumaindasitiri. Sezvo nyika yebasa iri kuwedzera nekukurumidza uye isingafungidzike, vanhu nemasangano vanofanirwa kuve vanokurumidza uye vanokwanisa kuchinjika kuti vagare vakakodzera. Cheryl anopa ziso rinovhura zveramangwana rebasa nemaitiro akatsvagisa-etsva uye mienzaniso uye anopa vaverengi matipi anobatsira ekuvaka kugona kwakakosha shanduko. "
- Liz O'Connor, Mubatanidzwa Mukuru, Daggerwing Boka
“NextMapping inosimbisa! Kana iwe uri mutungamiri webhizinesi uchitsvaga nzira dzekufambisa sangano rako padanho rinotevera, bhuku iri nderewe. Ndinoonga kutaura kwakajeka kwaCheryl uye ongororo yake yakaitwa nedhata inopa kuvimbika kune vateereri vake. ”
- Josh Hveem, COO, OmniTel Kutaurirana
"Cheryl Cran mukurukuri mutauri uye munyori anokurudzira vatungamiriri kuti vaone kupfuura ramangwana riri mberi uye vanokurudzira vatungamiriri kufamba zvinetswa kuzadzisa zvinangwa zvavo. NextMapping inoshandisa data rakakodzera kujekesa mafambiro uye rinopa rairo inoshanda pakuita iro ramangwana kuti riitike. Munzvimbo yebasa neenzanga umo shanduko iri kukurumidza uye mitemo iri kuchinja, chiono ichi chakajeka uye nzira yeramangwana rebasa hazvina kumbonyanya kukosha. ”
- Suzanne Adnams, Ongororo VP, Gartner
“Bhuku iri rwendo kuenda kune ramangwana rebhizimusi nehutungamiriri. Iko kushamwaridzana kwakanaka kwehungwaru hwesangano uye muponesi webhizinesi neruzivo rwakadzama uye kunzwisisa kwehunhu hwevanhu uye nezvekuti masisitimu ehupenyu akaomarara anoshanda sei. Chii chinoshamisa inzira iyo munyori anoratidza kuwirirana pakati pezvaanonyora nezvaari. Kugovera zvaanoona pamusoro pekuti angagadzira sei ramangwana rakagadzirira tsika uye kambani iye anoratidzira chinzvimbo chemutungamiri wekushanduka zvakanyatso kutaurwa uye zvakanyatsotsanangurwa mubhuku. Chinhu chinoshandura mutambo chinoshandura chinounza muverengi kujekesa kutsva, kurudziro uye chishuwo chekuita. ”
- Danilo Simoni, Muvambi uye CEO weBLOOM
"Kana zvasvika pakufamba neramangwana reBasa, Nextmapping inzvimbo yemwenje. Zvinotibatsira kuti tidzivise zvipingamupinyi zvine matombo zvisingaonekwe nepo tichironga nzira yakatwasuka kuenda kunzvimbo yedu yekushandira-inobatikana, inobudirira. Kusagadzikana haisi sarudzo sezvo shanduko dzakatikomberedza - Basa raCheryl rinopa mutungamiri wese chivimbo chekuzvitungamira pamwe nevamwe. ”
- Christine McLeod, Mazuva ese Vatungamiriri, Mutungamiri Wekutungamira & Advisor
Chitsauko 1 Kuongorora
Cheryl Cran anogovera peek paChitsauko 1 chebhuku rake idzva, "InoteveraMepu- Tarisira, Enda uye Gadzira Remangwana reBasa" rakabuda muna Kukadzi 2019.
Chitsauko 2 Kuongorora
Cheryl Cran anogovera nekukurumidza tariso paChitsauko 2. Ndezve mashandisiro ekuita maitiro ekuzivikanwa uye maitiro ehunhu hwevanhu kuronga zvirinani uye kuronga ramangwana rako semutungamiri, nhengo yechikwata, muzvinabhizimusi kana sangano.
Chitsauko 3 Kuongorora
MuChitsauko 3 tarisiro iri mukufamba-famba kwenguva yemberi ne future futurist uye yakazara pfungwa. Simba rekuchengeta pfungwa pazvinhu zvazvazvino uye ramangwana kugadzira ramangwana idzva mhedzisiro.
Chitsauko 4 Kuongorora
Chitsauko 4 chinotarisa nezveramangwana rakagoverwa, kugovera hupfumi uye hutungamiri hwakagovaniswa. Millenials uye Gen Z vanoda kushanda mukugovaniswa uye kuvhura sosi nzvimbo yebasa.
Chitsauko 5 Kuongorora
MuChitsauko 5 ratidziro ndeyekutsvaga kushandurwa kwedhijitari shanduko, kutsvaga uye kuchengeta vanhu vakanaka, uye nemakambani ari kugadzirisa sei mamwe matambudziko. Izvo zvipingamupinyi zvinoda mhinduro nyowani nekugadzira.
Chitsauko 6 Kuongorora
Chitsauko 6 iri kuitira kuti ugadzire shanduko yaunoda kuti uve netsika yekuvimba. Iko kudiwa kwevatungamiriri kuti vagadzire iyo tsika yakajeka uko zvikwata zvinogona kunzwa zvakachengeteka kuti zviite, kubatana uye kushandura.
Chitsauko 7 Kuongorora
Ichi chitsauko chinotarisa nezveramangwana rakanyanya revanhu mune zera remarobhoti, AI, otomatiki uye marobhoti. Vashandi vanotsvaga nzvimbo ine mweya yakawanda uye yekushanda kwevanhu. Izvi zvinoreva kutarisisa mutengi uye ruzivo rwevashandi senge hwekutarisa kwepamusoro nehunyanzvi hunotsigira IZVO isu tinogadzira ruzivo rwevanhu zvakanyanya.
Chitsauko 8 Kuongorora
Cheryl Cran anogovera tarisiro yeChitsauko 8 yebhuku rake idzva, InoteveraMapa- Tarisira, Famba uye Gadzira Iyo Ramangwana Rebasa. Zvese zvinouya pamwechete zvinosanganisira iyo InoteveraMapa maitiro kubatsira vatungamiriri, zvikwata uye masangano kuve neramangwana rakagadzirira.
Cheryl Cran is #1 ramangwana reanoshanda influencer, gurukota repamusoro repasirese uye rakatumidzwa semumwe wevatauriri vepamusoro hwehutungamiri hweNorth America. Iye ndiye munyori wemabhuku manomwe kusanganisira, "Unyanzvi hweKutungamira Hutungamiriri - Kutyaira Shanduko Munyika Inokurumidza Kufamba".
Iye anotsvaga anotsvaga anobatsira vatungamiriri, zvikwata pamwe nevamabhizinesi kutanga, kuwedzera agility uye kutungamira ramangwana rebasa nekukurumidza shanduko. Basa rake rave richiratidzwa muWashington Post, Huff Post, Metro New York, Mabhizimusi Magazine, nezvimwe.